“Sidii aan Gacan ku Dhiiglaha u Nacnay, waa inaynu Carrab ku Dhiiglahana u Nacnaa..” Sheekh Dirir. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA “Sidii aan Gacan ku Dhiiglaha u Nacnay, waa inaynu Carrab ku Dhiiglahana...
“Sidii aan Gacan ku Dhiiglaha u Nacnay, waa inaynu Carrab ku Dhiiglahana u Nacnaa..” Sheekh Dirir.
Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaa bulshada ku baraarujiyey in dadkii hore ee saalixiyiintu ilaashan jireen diintooda iyo ajarka camalka ay sameeyaan inka badan inta aynu ilaashano adduunyada aynu haysano, loona baahan yahay ku dayashadooda.
Khudbadii Jimcaha ee shalay oo Sheekh Maxamed kaga hadlay halista xadgudubka sharafta iyo cirdiga qofka Muslimka, taasoo dadka qaarkood u haystaan waxyar in qofka sharaftiisa lagu xadgudbo. “Waxaynu tafaasiil ka bixin doonaa mowqifka sharcigu ka taagan yaha iyo daliilada ku soo arooray iyo dadkii wanaagsanaa ee innaga horreeyey siday ahaayeen”
“Marka hore nusuus badan ayaa ku soo aroortay oo ka digaysa qofku inaanu ku xadgudbin sharafta dadka, iyo sida loogu baahan yahay in qofku ilaaliyo carrabkiisa. Carrabka oo ka mid ah nicmooyinka ILLAAHAY SW bixiyey kuwa ugu waaweyn, ALLENA SW inNoogu manno sheegtay, “Miyaanan idiin siin Carab, Laba-dibnood io Laba Indhood”. Bal waxaad ka warantaa qofka hadalku iska taagay, ee doonaya inuu wax cabiro, ee waxba kuu sheegi kari la’, waxaad sawirataa qofka waxba dhadhamin kari la’ macaan iyo qadhaadh, nimcooyinka Carabka ee Ilaahay SW inoogu manno sheeganayo ayuu ku jiraa, laakiin, culayskiisu wuu yaryahay, halistiisuna wa weyn tahay, dembi weyn iyo ajar weyn labadaba Carabkuu ka yimaadaa. Markaa arrinka aynu aad u adkeynayno, sida Diinteenu innagu waaninayso ilaalinta Carabka weeye.
Markaa waxaynu leenahay xanta, ceebaynta iyo cayda, sidii gacan-ku-dhiiglaha aynu u nacnay, waa inaynu carab-ku-dhiiglahana u nacno . Ilaahay ceebaheena ha asturo, camalkeenana ha wanaajiyo, aamiin.”
Ra’iisal Wasaare Abiy ahmed oo khariirada ka saarey somaliland